မင်းမင်းဇော်မောင် ● ကွီးရောဘတ်နှင့် အနောက်တံခါးအနားသို့ တခေါက် | MoeMaKa Burmese News & Media
“ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ အားနာမိတယ် ဒကာလောဘ”
“ရောဘတ်လို့ခေါ်ပါ အရှင်ဘုရား။ ရပ်ရွာအရေးဟာ တပည့်တော်တို့ ရွာသားအားလုံးရဲ့အရေးမို့ အပန်းမကြီးပါဘူးဘုရာ့”
“ဪအေးအေး ရောဘတ်။ ဒကာကြီးကိုယ်တိုင်လာခဲ့တာ ဘုန်းကြီးအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ အနောက်တံခါးမလုံတော့ လူဆိုးသူခိုးတွေ ဝင်မှာစိုးရိမ်ရတာနဲ့ အိပ်ကောင်းခြင်းမအိပ်ရ၊ စားကောင်းခြင်းမစားရနဲ့ကွာ။ ကိုယ်တိုင် လုံအောင် မကာနိုင် တော့လည်း ဝင်လာသမျှကို မတားဆီးနိုင်ဘူးလေ၊ မိတ်ဆွေလား ရန်သူလား ဘယ်လိုခွဲခြားနိုင်မတုံးကွယ်။ အရေးထဲ ကိုယ်မွေးတဲ့ခွေးတွေ ကိုယ်တိုင်က သူစိမ်းမြင်လို့ ကိုက်ဖို့နေနေသာသာ သူများကျွေးတာတွေ စားပြီး ဟောင်တောင် မ ဟောင်တော့ဘူးကွ။ အမြီးတနှံ့နှံ့နဲ့။ ဒီခွေးတွေကြောင့် ဘုန်းကြီးစိတ်လေတယ် ဒကာရောဘတ်ရေ”
“တင်ပါ့ဘုရား စိတ်အေးအေးထားပါ။ တပည့်တော် ဖြေရှင်းပေးပါ့မယ်ဘုရာ့။ အခုလောလောဆယ် ရွာသူရွာသား အားလုံး အနောက်တံခါး ရှိရာအရပ်မှာ စုရုံးကြဖို့စီစဉ်ပေးပါဘုရား”
“အလို၊ ကြည့်စမ်း အခုစုရုံးရောက်ရှိလာသူတွေ အားလုံး မိန်းမတွေချည်းပဲ။ မောင်မင်းတို့ ဘယ်သဟာပြုလို့ မင်းတို့ရွာမှာ ယောက်ျားသားတွေ သည်လောက်နည်းပါးရသတုံး။ ယောက်ျားတွေ ဘာလို့ထွက်မလာကြတာလဲ။ ဘယ်ရောက်နေကြတာ တုံး”
“မှန်လှပါ ဝန်ကြီးဘုရာ့၊ ဘုန်းတော်ကြောင့် အောင့် အောင့်”
“ဟလို ဟလို အေးပြော။ (——————-) ဘာ !!! မရဘူး ဟုတ်လား။ (————-)။ ဘူဒိုဇာနဲ့သာ ထိုးလိုက်ကွာ”
“ကဲ ဆက်ပြော မောင်မင်း”
“မှန်လှပါ ဘုန်းတော်ကြောင့် ဟောင့် ဟောင့်”
“ဟုတ်ကဲ့ ဒီရွာမှာ ယောက်ျားမရှိသလောက်ပါ အဘ”
“ဟျောင့် အဘလို့ မခေါ်နဲ့ကွာ၊ မကြိုက်ဘူး။ တရင်းတနှီး ကွီးပဲခေါ်”
“ဟုတ်ကဲ့၊ ကွီးရောဘတ်ခင်ဗျာ၊ ရွာက ယောက်ျားတော်တော်များများ နိုင်ငံခြားသွားကြတယ်ခင်ဗျ”
“ဘာ!! ၊ သူတို့က မိန်းမတွေ၊ ကလေးတွေထားပြီး ဘာသွားလုပ်တာတုံး”
“ဘုန်းတော်ကြောင့် အလုပ်သွားလုပ်ကြတာပါဘုရာ့၊ အဲ အဲ ကွီးရောဘတ်။ မလေးရှားထွက်သူထွက်၊ ထိုင်းကိုသွားတဲ့လူ သွားဆိုတော့ ရွာမှာ ယောက်ျားဆိုလို့ အဘိုးကြီးနဲ့ ကလေးတွေပဲ ကျန်တာခင်ဗျ။ ဒါတောင် တချို့မိန်းကလေးတွေ စင်ကာ ပူကို အိမ်အကူဆိုပြီးထွက်ကြသေးတာ၊ နို့မို့ရင် မိန်းကလေးတွေ ဒီထက်ပိုများတယ် ကွီးရောဘတ်”
“အလို ဒါမျိုးရှိသေးတာလား။ နေစမ်းပါဦး။ ဒါဆို မင်းက ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီး ဘယ့်နှာပြုလို့ ဒီမှာရှိနေသေးတုံး”
“ငှင့်၊ ကျန်ဆို တူညားမှ မတွားရဲထှာ”
“ဗုဒ္ဓော! ၊ လက်စသတ်တော့ မောင်မင်းက ဟိုဒင်း ဟိုဟာဖြစ်နေတာကိုး လခွမ်း။ အနောက်တံခါး ခုလိုဖြစ်နေတာ မောင်မင်း တို့ မသိကြဘူးလား။ အားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ဝိုင်းပြီးလုပ်ကိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ဒီလောက်ထိ အခြေအနေဆိုးစရာ အ ကြောင်းမရှိဘူး”
ထိုစဉ် အမျိုးသမီးတဦးက ထရပ်လျက် –
“ကျွန်မတို့ရွာမှာ ယောက်ျားတွေမှမရှိတာ၊ သမီးတို့ မိန်းမတွေ ဘာလုပ်နိုင်မှာတုံး။ ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေက လက်သမား အလုပ်တွေ မလုပ်တတ်ဘူးရှင့်။ နို့ပြီး တံခါးကြီးတွေက အကြီးကြီးတွေ”
“အေး အဲဒီလိုဆင်ခြေတွေပေးနေသရွေ့ ဒီတံခါးကြီး ပြန်ကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး။ အမှန်တော့ မင်းတို့တွေ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာနည်းလို့ အခုလိုဖြစ်ကြရတာ။ ပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီး ပြုပြင်မှဖြစ်တော့မယ်”